Ny lohateny fahatelo an'ny saga dia tonga niaraka tamin'ny Candy Crush Jelly Saga | Androidsis
Tamin'ity taona lasa ity dia nanana ny iray amin'ny vaovaon'ny taona isika raha ny mahery rehetra Nahazo mpanjaka i Activision mitentina 5.900 tapitrisa dolara, iray amin'ireo studio lalao video nahatratra, noho ny lalao video mamy tsara, izany na iza na iza ao amin'ny fianakaviana dia milalao lalao sasany amin'ity fananahana ity antsoina hoe Candy Crash. Lalao video izay mandray ny zavatra noforonin'ny sasany fa nanome azy kely miova miaraka amin'ny siramamy, vatomamy ary ilay tsiro mamy izay tian'ny mpampiasa rehetra, na ny taonany na ny toe-piainany. Satria fantatr'i KING tsara ny fanaovana an'io, izao dia nitondra anaram-boninahitra hafa ho antsika isika taorian'ny fanatanterahana an'io saga io ka io fiandohan'ny taona io no mamy indrindra amin'ny rehetra.
Cady Crush Jelly Saga dia ny fanandramana fahatelo amin'ity andiany Candy Crush ity hiditra ny fahatsiarovana ao anaty findainao ary noho izany aza atsahatra ny fiankinan-doha amin'izao andro voalohany amin'ny 2016. Andao lazaina izao fa mpilalao vaovao no miseho, ary ity dia Jelly Queen. Hanohitra anao amin'ny lohateny vaovao hahitanao ny lalao vaovao, ny endri-javatra vaovao ary ny ady farany ataon'ny sefo. Eto ianao dia hilalao toa an'i Jenny ary tsy maintsy hampiseho ny hafaingam-pandehananao ara-tsaina hiditra amin'ireo ambaratonga rehetra izay hidiranao tanteraka alohan'ny fanambin'ny Jelly Queen. Lohateny KING vaovao izay manaraka ireo roa hafa teo aloha.
1 Mamy sy mamy
2 Haavo maherin'ny 100
Mamy sy mamy
MPANJAKA milalao ny vatomamy hisarihana mpilalao an'hetsiny eran'izao tontolo izao toy ny hoe ny kinova finday an'i Charlie sy ny Chocolate Factory. Mendrika ny hanohizany manantitrantitra io hevitra momba ny fitrandrahana ny zava-tsoa Candy Crush io ary hanohy handrehitra mpilalao marobe an-tapitrisany izay mety nahavita ny roa voalohany tamin'ny fotoana iray.
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra amin'ny Candy Crush Jelly Saga ny fomba fifaninanana izay ahafahanao manao paikady fitambarana vatomamy handresy ny mpanohitra amin'ny lalao iray ihany. Ny hatsarany hafa dia ny maody lalao "Jelly" sy "Boss". Amin'ny voalohany dia tsy maintsy atambatra ireo vatomamy miaraka amin'ny jelly mba hiparitaka eraky ny solaitrabe, fa amin'ny faharoa kosa, ny mpanjakavavy "Jelly" sy ireo forongony dia hametraka anao amin'ny fitsapana amin'ny fomba mifaninana.
Haavo maherin'ny 100
Ankoatry ny zava-baovao dia midika izany fomba lalao roa, ho eny an-tananao mihoatra ny ambaratonga 100 izay hanomezana fahafaham-po ny filanao zava-mamy, zava-pisotro misy alikaola ary zava-mamy isan-karazany. Raha fintinina, izay rehetra nahatonga an'io saga malaza io dia miverina amin'ny alàlan'ny angovo bebe kokoa.
Ireo latabatra isa avy Facebook Connect dia hamela anao hampitaha ny isa azonao miaraka amin'ireo sakaizanao, ka ny ratsy amin'ny filalaovana bebe kokoa dia mahatratra zava-bita tsy azo tratrarina amin'ity lalao video vaovao matsiro avy amin'ny KING ity izay notarihin'i Activision. Ho azo atao koa ny mampifanaraka ireo lalao amin'ny alàlan'ny fitaovana finday samihafa anananao, hahafahanao mifindra amin'ny finday avo lenta amin'ny bus mankany amin'ny tablette ao an-trano ao ambanin'ny Wi-Fi.
Manaporofo an'io indray i KING any an-tsahany tsy azo resena izy miaraka amina kalitao teknika tena tsara amin'ny ambaratonga rehetra. Na ny sary mahafinaritra azy, na ny sary hafa, na ny mozika sy ny feo vokadiny izay manasongadina kokoa ny filalaovana bebe kokoa an'ity Candy Crush Jelly Saga ity.
Raha fintinina, mitovy ihany fa, ho an'ny zavatra tiako ary betsaka. Azo alaina maimaim-poana ao amin'ny Play Store miaraka amin'ireo micropayments izay miharihary amin'ny maodely Freemium. Recommended ho an'ny karazana mpampiasa rehetra.
Ny sary miloko
More Candy Crush
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Candy manorotoro » Candy Crush Jelly Saga, vatomamy bebe kokoa ho an'ny olona rehetra miaraka amin'ny Mpanjaka vaovao
Worms 4, ny fiverenan'ny kilasika izay tsy manana chicha sy vaovao maro hafa